IGroove: Ithikithi Le-Helpdes lamathimba Wokusekela | Martech Zone
Uma uyiqembu lokuthengisa elingenayo, ithimba lokwesekwa kwamakhasimende, noma i-ejensi oyibonayo ngokushesha ukuthi amathuba nezicelo zamakhasimende zingalahleka kanjani kumagagasi ama-imeyili umuntu ngamunye awathola online. Kufanele kube nezindlela ezingcono zokuqoqa, ukwabela, nokulandelela zonke izicelo ezivulekile enkampanini yakho. Yilapho kusebenza khona ideski ledeski losizo futhi lisiza ekuqinisekiseni ukuthi iqembu lakho ligxile ekuphenduleni nasekusebenzeleni amakhasimende.
Izici Zesistimu Yokwesekwa KweThikithi Lokuxhaswa Kwama-Groove
Ithikithi Lamaqembu - Nikeza amathikithi kumalungu ethimba athile noma amaqembu. Faka amanothi ayimfihlo ongabonwa nguwe nethimba lakho kuphela. Buza imibuzo, yenza iziphakamiso, noma ubuyekeze imilayezo evela kumalungu eqembu elisha ngaphambi kokuthi ithunyelwe. Bona kahle ukuthi kwenzekani eGroove ngesikhathi sangempela. Uzokwazi lapho kunikezwa amathikithi, kuqedwa, kuvulwa kabusha, noma kukalwa.
Imininingwane yamakhasimende eningiliziwe - Akusekho ukuzingela amathikithi amadala ukubona ukuthi ikhasimende likhuluma ngani. Finyelela kuwo wonke umlando wokusekela wamakhasimende ngokuchofoza okukodwa.
Amathuluzi okukhiqiza - Gcina izimpendulo zemibuzo ejwayelekile, bese uzifaka ngokuchofoza kunoma yimuphi umlayezo. Dala amalebula wangokwezifiso ukuhlela amathikithi noma ukuwamaka ukuze asetshenziswe esikhathini esizayo usebenzisa noma yiluphi uhlelo olusebenza kangcono kuwe. Sebenzisa imithetho ukushintsha indlela amathikithi aphathwa ngayo. Isibonelo, nikeza ithikithi kwilungu leqembu ngokususelwa kubani abavela, noma maka imilayezo efaka igama okuphuthumayo.
imeyili - Uhlelo lwethikithi lenkathazo lweGroove lubukeka futhi luzwakala ncamashi njenge-imeyili kumakhasimende akho. Amakhasimende akho awasoze adlula kolunye uhlelo lokungena ngemvume noma akhombe inombolo yethikithi ukuthola usizo.
Social Media - Bona bese uphendula kumaTweets nakuFacebook odongeni okuthunyelwe ngomkhiqizo wakho, futhi uguqule kalula okuthunyelwe komphakathi kube ngamathikithi okusekela.
Landelela ukwesekwa kwefoni - Ngena amanothi aningiliziwe wezingxoxo zocingo ezingagcinwa njengamathikithi, ngakho zizovela emlandweni wekhasimende lakho futhi ungazikhomba nganoma yisiphi isikhathi.
Izilinganiso zokweneliseka - Vumela amakhasimende akho alinganise izimpendulo zakho futhi akunikeze impendulo.
Isizinda Solwazi - Siza amakhasimende akho aku-inthanethi azisize ngesisekelo solwazi.
Ukuhlanganiswa Kwethikithi Lokuxhaswa KweGroove
amawijethi - Iwijethi yokusekela yakwaGroove iqinisekisa ukuthi amakhasimende azi njalo ukuthi angathintana kanjani, futhi kungenziwa ngezifiso ukuzizwa njengengxenye engenamthungo yesiza sakho.
API - Sebenzisa eyethu API ukudonsa idatha yamakhasimende kusuka ku-CMS yakho yangaphakathi, uhlelo lokusebenza lokukhokha, noma enye isoftware yomuntu wesithathu, bese uyibona kuphrofayela yekhasimende lakho eduze kwanoma iyiphi ithikithi.
Ukuxoxa bukhoma - Izinyathelo ezimbili ze-SnapEngage noma u-Olark ukuhlanganiswa kwengxoxo bukhoma ukugcina izingxoxo zakho eGroove futhi usekele amakhasimende akho ngesikhathi sangempela.
CRM - Xhumanisa i-Groove ne-Highrise, i-Batchbook, i-Nimble, i-Zoho noma i-Capsule futhi uthole ukufinyelela okulula kwimininingwane yamakhasimende ejulile kusuka ku-CRM yakho, ibukwe eduze kwethikithi ngalinye. Uma lokho kunganele, banikeza ukuhlanganiswa neZapier.
imeyili - I-MailChimp, i-Campaign Monitor, kanye nokuhlanganiswa okuqhubekayo koxhumana nabo.
ukuxega - Ukuhlanganiswa ngqo eqenjini lakho lokuxhumana yesikhulumi.
Groove uhlelo olukhokhelwayo lapho ungangeza futhi ususe amakhasimende ku-akhawunti yakho, ukhokhe u- $ 15 ngomsebenzisi ngenyanga.
Qala Isivivinyo Sakho Samahhala sezinsuku ezingama-30
Tags: Iwijethi ye-APIIbhukuUmkhankaso WokumkhankasoCapsuleUkuxhumana okuqhubekayoumhlangainkathoiwijethi losizo ledeskiusizoHighrisei-mailchimpI-NimbleOlarkSnapEngageukwesekaithimba lokusekelaiwijethi yokusekelaamaqembuUkunikezwa ithikithizapierI-Zoho
Amamethrikhi angukhiye wezibalo zokumaketha kwangaphakathi
Jan 5, 2017 ngo-11: 54 PM
Siyabonga ngokwabelana ngolwazi oluhle mayelana nohlelo lweThikithi leHelpdesk, ukuthi lusiza kanjani ekusekeleni amaqembu ..